အစားအသောက် – Media9
ဆယ်လီ ဖက်ရှင် ဗြီဒီယို ရုပ်ရှင် အစားအသောက် အနုပညာ
fan meeting အတွက်သေချာလေး ပြင်ဆင်ထားတယ်ဆိုတဲ့ ဝတ်မှုန်ရွှေရည်…
November 23, 2019 media9Comment(0)
[Unicode] ” အခုလောလောဆယ်တော့ မီဒီယာတွေအများကြီး ၊ Fan တွေအများကြီးနဲ့ကြည့်ရတာမဟုတ်သေးတော့ သိပ်တော့ရင်မခုန်သေးပါဘူး ” လို့ ချင်းတောင်တန်းက မိဘမဲ့ မိန်းက လေး တစ်ယောက်အ နေနဲ့ပါဝင်အားဖြည့်ထားတဲ့ ”တိမ်တွေ ပေါ်ကပန်း” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးအ ပေါ်ရင်ခုန်မှုအ ကြောင်းတွေနဲ့အတူ မကြာခင်မှာပြုလုပ်မဲ့ သူမရဲ့ Fan Meeting ပွဲလေးအ ကြောင်းကို ပြည်သူ့အချစ်တော် ”ကစ်ကစ်” ကခုလိုပြောပြသွားခဲပါတယ်။ [Zawgyi] ” အခုေလာေလာဆယ္ေတာ့ မီဒီယာေတြအမ်ားျကီး ၊ Fan ေတြအမ်ားျကီးနဲ ့ျကည့္ရတာမဟုတ္ေသးေတာ့ သိပ္ေတာ့ရင္မခုန္ေသးပါဘူး ” လုိ့ခ်င္းေတာင္တန္းက မိဘမဲ့ မိန္းက ေလး တစ္ေယာက္အ ေနနဲ ့ပါ၀င္အားျဖည့္ထားတဲ့ ”တိမ္ေတြ ေပၚကပန္း” ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားျကီးအ ေပၚရင္ခုန္မွုအ ေျကာင္းေတြနဲ […]
ဓလေ့ရိုးရာ လူမှုဘဝ အစားအသောက်
August 21, 2019 media9Comment(0)
[Unicode] လယ်ကန်သင်းရိုးပတ်လည်က သဘာဝဟင်းလျာ…လယ်ကြွက်ဟင်းနဲ့ကန်ဇွန်းရွက်ကြော် မိုးတွေဖြိုင်ဖြိုင်ရွာတဲ့အချိန်မျိုးဆို လယ်ကွင်းထဲမှာရေတဖွေးဖွေးနဲ့ ကန်သင်းရိုးပတ်လည်မှာ သဘာဝဟင်းစားတွေကိုဖွေရှာပြီး ချက်ပြုတ်စားသောက်ကြတဲ့ လယ်တောဓလေ့ကို ခံစားကြည့်လိုက်ပါဦး… [Zawgyi] လယ္ကန္သင္း႐ိုးပတ္လည္က သဘာဝဟင္းလ်ာ…လယ္ႂကြက္ဟင္းနဲ႔ကန္ဇြန္း႐ြက္ေၾကာ္ မိုးေတြၿဖိဳင္ၿဖိဳင္ရြြာတဲ့အခ်ိန္မ်ိဳးဆို လယ္ကြင္းထဲမွာေရတေဖြးေဖြးနဲ႔ ကန္သင္း႐ိုးပတ္လည္မွာ သဘာဝဟင္းစားေတြကိုေဖြရွာၿပီး ခ်က္ျပဳတ္စားေသာက္ၾကတဲ့ လယ္ေတာဓေလ့ကို ခံစားၾကည့္လိုက္ပါဦး…
ဆယ်လီ ဗြီဒီယို အစားအသောက် အမေးအဖြေ
Facebook Account ကနေ အစားအသောက်တွေချက်ရောင်းဖြစ်တဲ့ “ပွင့်”
July 3, 2019 media9Comment(0)
[Unicode] အစားစားရတာြကိုက်သလို ချက်ပြုတ်ရတာလည်းကြိုက်တဲ့ သရုပ်ဆောင်ပွင့်ကတော့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ပရိသတ်တွေကို စနောက်ပြီး ချက်ရောင်းပေးရာကနေ တစ်ပတ်တစ်ခါ Menu တွေတင်ပြီး ရောင်းပေးဖြစ်တဲ့အကြောင်း..။ [Zawgyi] အစားစားရတာၾက္ိဳက္သလို ခ်က္ျပဳတ္ရတာလည္းၾကိဳက္တဲ့ သရုပ္ေဆာင္ပြင့္ကေတာ့ သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ ပရိ္သတ္ေတြကို စေနာက္ျပီး ခ်က္ေရာင္းေပးရာကေန တစ္ပတ္တစ္ခါ Menu ေတြတင္ျပီး ေရာင္းေပးျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း..။
Master Chef Myanmar Winner ဒေါ်တင်တင်ဦး ပြောပြခဲ့တဲ့ သူ့ရဲ့ပြိုင်ပွဲအတွေ့အကြုံများ
May 3, 2019 May 3, 2019 media9Comment(0)
“ျပိဳင္ပြဲဝင္ေတြအေနနဲ႔ အေမကသားသမီးကိုဆူတာမ်ိဳး၊ဆရာကတပည့္ကိုဆူတာမ်ိဳး ႏွလံုးသြင္းျပီးျပိဳင္ပါ။သူတို႔က ကိုယ့္အတြက္ေကာင္းဖို႔ေျပာတာသည္ ေနာက္တပြဲမွာ ေရွာင္ရမယ့္၊သတိထားရမယ့္ အခ်က္။အဲဒီလိုမ်ိဳးပါ။သူတို႔ေျပာတာေတြကို အာရုံစိုက္ျပီး ဆူတယ္လို႔သေဘာထားျပီး လုပ္မယ္ဆိုရင္ ေၾကာက္စရာမေကာင္းပါဘူး”လို႔ ဒိုင္ေတြရဲ႕ျပင္းထန္တဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြအေပၚ သူ႔ရဲ႕အျမင္ကို ေျပာျပေပးသြားခဲ့တဲ့ Master Chef Myanmar Winner ေဒၚတင္တင္ဦး
ဆယ်လီ အစားအသောက် အမေးအဖြေ
နေဆန်းပြောပြလာတဲ့ သရုပ်ဆောင်မင်းသားဘဝနဲ့ နယူးချစ်တီးထမင်းဆိုင်ပိုင်ရှင်ဘဝ
April 27, 2019 media9Comment(0)
“ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ဝင္စားခ်င္တဲ့ဆိုင္မ်ိဳးျဖစ္ေအာင္ ရည္ရြယ္ျပီး “နယူးခ်စ္တီး”ကိုဖြင့္ထားတာပါ။သူကကိုယ္တိုင္စားပြဲထိုးရတာလည္းသေဘာက်တယ္ေလ။မျမတ္ေတာ့တာမွမဟုတ္တာ။အျမတ္နည္းသြားတာပဲရွိတယ္။အေရအတြက္မ်ားမ်ားေရာင္းရေတာ့ ေစ်းမတက္ဖို႔ေတာင့္ခံႏုိင္ပါေသးတယ္”လို႔ နယူးခ်စ္တီးအေၾကာင္း ေျပာျပခဲ့တဲ့ ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ေနဆန္း နဲ႔ ဇနီးသည္ေခ်ာစု….
[Unicode] နေ့စဉ်စားသုံးနေကျ သရေစာတွေနဲ့ အစားအစာတွေရဲ့ နောက်ကွယ်က အမှန်တရားတွေ အကြောင်းကို သိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာ လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြပြီး ဒီထဲကမှ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်တွေကို ဖော်ပြပေးသွားမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ (၁) မုန်လာဥနီ မုန်လာဥနီတွေရဲ့ မူလအစအရောင်ဟာ ခရမ်းရောင်တွေဖြစ်ကြပြီး ၁၆ ရာစုလောက်ကနေစပြီး လိမ္မော်ရောင် မုန်လာဥနီတွေကို စတင်စိုက်ပျိုးခဲ့ကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မုန်လာဥရဲ့ မျိုးရင်းအရောင်တွေကတော့ အဖြူရောင်နဲ့ ခရမ်းရောင်တို့ပဲ ဖြစ်ကြပါတယ်။။ (၂) ခရမ်းချဉ်သီး ခရမ်းချဉ်သီးတွေကို လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၈ ရာစုလောက်က “The Poison Apple” အဆိပ်ရှိတဲ့ပန်းသီးလို့ ခေါ်ဝေါ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တော့ အဲဒီခေတ်က မင်းမျိုးမင်းနွယ်တဦးဟာ ခရမ်းချဉ်သီးကို စားမိပြီး အစာအဆိပ်သင့်ကာ သေဆုံးခဲ့တာကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ (၃) Cracker သရေစာအဖြစ် စားသုံးလေ့ရှိကြတဲ့ Cracker တွေဟာ […]
ဗဟုသုတ အကြံပြုချက် အစားအသောက်
ထမငျးခကြျပွုတျရာမှာ အိမျရှငျမတိုငျး သိထားသင့ျတဲ့ နညျးလမျးမြား [Unicode] နေ့စဉျစားသုံးမှုမှာ အဓိက အစားအစာတမြိုးဖွဈတဲ့ ထမငျးခကြျပွုတျတာဟာ အပေါျယံအားဖွင့ျတော့ လှယျကူတယျလို့ ထငျရပါတယျ။ ပွီးပွည့ျစုံတဲ့ ထမငျးဖွဈဖို့အတှကျ အိမျရှငျမတှကေို အခုဖောျပွပေးမယ့ျ အခကြျတှကေ အကူအညီပေးနိုငျမှာပဲ ဖွဈပါတယျ။ (၁) ရာသီဥတု အပူရှိနျကွောင့ျ ထမငျးတှေ အလှယျတကူ သိုးမသှားစဖေို့အတှကျ ဆားအနညျးငယျလောကျကို ထမငျးခကြျတဲ့အခါ ဖွူးပွီးထည့ျနိုငျသလို ထမငျးကွမျးတှကေို ပွနျနှှေးစားတဲ့အခါမြိုးမှာလညျး ဆားအနညျးငယျ ဖွူးပေးခွငျးက ထမငျးက အနံ့အသကျတှကေို ပြောကျကငျးစမှော ဖွဈပါတယျ။ (၂) ထမငျး မခကြျပွုတျမီ ဆနျကို သုံးရလေောကျအထိ ရကွေညျအောငျ ဆေးပေးခွငျးဟာ ဆနျထဲက အနယျအနှဈတှကေို ဖယျရှားပေးတာကွောင့ျ ထမငျးသိုးသှားမှာကို စိတျပူစရာ မလိုတော့ပါဘူး။ ဒီလိုမြိုး ၃ ရခေန့ျဆေးပေးခွငျးဟာ ဆနျထဲက အနယျအနှဈတှကေို […]
နိုင်ငံတကာ ဗဟုသုတ အစားအသောက်
အသားစားသုံးမှု နညျးသော နိုငျငံမြား
သက်သတ်လွတ် စားသုံးမှုကို တချို့က ဘာသာရေးအရ ရှောင်ကြဉ်သလို တချို့က သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ဖို့ ရှောင်ကြဉ်လေ့ ရှိကြပါတယ် [Unicode] သက်သတ်လွတ် စားတဲ့ အလေ့အကျင့်ကို ရှေးဟောင်း အိန္ဒိယမျိုးနွယ်စုတွေနဲ့ ဂရိလူမျိုးတွေက စတင် ကျင့်သုံးခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ ဂရိနိုင်ငံဟာ သက်သတ်လွတ် စားတဲ့ အလေ့အကျင့် ပျောက်ဆုံးသလောက် နီးပါး ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ သက်သတ်လွတ်ဆိုရာမှာလည်း နို့ထွက်ပစ္စည်း၊ ပျားရည်နဲ့ အခြား တိရစ္ဆာန်က ရတဲ့ ပစ္စည်းတွေ အားလုံးကို ရှောင်ကြည်တာကိုသာ ဆိုလိုပါတယ်။ သက်သတ်လွတ်စားတဲ့ လူတွေမှာဆိုရင်လည်း အကြောင်းပြချက်မျိုးစုံ ရှိပါတယ်။ တချို့က ဘာသာရေးအရ ရှောင်ကြဉ်ပါတယ်။ တချို့က သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ဖို့ ရှောင်ကြဉ်တာ ဖြစ်သလို တချို့က ကျန်းမာရေးအရ ရှောင်ကြဉ်လေ့ […]
ကျန်းမာရေး အကြံပြုချက် အစားအသောက်
[Unicode] လူတစ်ယောက်ချင်းစီမှာ သဘာဝ အာရုံ ၅ ပါးစီပေးအပ်ထားပါတယ်။ ဒါတွေကတော့ အကြားအာရုံ၊ အမြင်အာရုံ၊ အနံ့ခံအာရုံ၊ အရသာခံနိုင်စွမ်းအာရုံ နဲ့ အထိအတွေ့အာရုံတို့ပါ။ ဒီတစ်ခုချင်းစီကောင်းပါ ကျန်းမာပါမှ လူတစ်ယောက်က စိတ်လက်ချမ်းသာရတာပါနော်။ ဒီလိုမျိုးကျန်းမာဖို့ဆိုရာမှာလည်း လိုအပ်တဲ့ ဗီတာမင် နဲ့ သတ္တုဓာတ်တွေပြည့်ဝနေဖို့လိုအပ်မှာပါ။ ဒီတစ်ခေါက်တော့ အကြားအာရုံလေးကောင်းဖို့ ဘာတွေလိုအပ်မလဲဆိုတာကို နည်းနည်းလောက်ဆွေးနွေးချင်ပါတယ်။ အကြားအာရုံကောင်းစေဖို့ ဒါတွေလိုအပ်ပါမယ် တစ်ကိုယ်လုံး ဟန်ချက်ညီညီလှုပ်ရှားပြီး ကျန်းမာနေစေဖို့ ဗီတာမင်နဲ့ သတ္တုဓာတ်တွေ သင့်တင့်မျှတစွာရရှိဖို့လိုအပ်မှာပါ။ အကြားအာရုံကောင်းစေဖို့ဆိုရင်တော့ ပိုတက်ဆီယမ် အကြားအာရုံအတွက်အရေးပါတဲ့ အစိတ်အပိုင်းဖြစ်တဲ့ အတွင်းနားရဲ့ အရည်ဓာတ်ကို ထိန်းညှိပေးပါတယ်။ အရွယ်ရလာတာနဲ့အမျှ အရည်ဓာတ်ကျဆင်းလာပြီးအကြားအာရုံချို့တဲ့လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပိုတက်ဆီယမ်ကြွယ်ဝစေဖို့ အာလူး၊ ဟင်းနုနွယ်၊ ခရမ်းချဉ်သီး၊ပဲအမျိုးမျိုး၊ စပျစ်သီးခြောက်၊ ငှက်ပျောသီး၊ လိမ္မော်သီး၊ ဒိန်ချဉ်၊ အဆီထုတ်နို့တို့စားသုံးပေးပါ။ ဖောလစ်အက်ဆစ် […]
ကျန်းမာရေး အကြံပြုချက် အစားအသောက် အလှအပ
Diet လား? လေ့ကငြ့ျခနျးလား? ဘယျဟာကပိုသာလဲ
February 11, 2019 February 11, 2019 media9Comment(0)
[Unicode] ဘယ်ဟာအကောင်းဆုံးလဲ? လေ့ကျင့်ခန်းလား? အစားရှောင်တာလား? ခဏခဏစဉ်းစားနေရပါတယ်။ အများစုကတော့ အဲဒီနှစ်မျိုးအချိုးကျရောစပ်တာ ကောင်းတယ်လို့ပြောကြတယ်။ လက်ခံရခက်ခက်ပါပဲ။ ကိုယ်တိုင်လည်း အဲဒီနှစ်မျိုးလုံးပေါင်းပြီး ကြိုးစားတာတောင် ပေါင်ချိန်ကတုတ်တုတ်မှမလှုပ်ဘူး။ သေချာတာတစ်ခုတော့ရှိပါတယ်။ အချက်အလက်တွေ ပြန်စစ်ဆေးဖို့လိုနေပြီဆိုတာပါပဲ။ ဒီတော့ ကျွန်မတကယ် ကိုယ်တွေ့လေ့လာခဲ့သမျှတွေ အကုန်ဖောက်သည်ပြန်ချပေးမယ်နော်။ လေ့ကျင့်ခန်းကသာလား? အစားရှောင်Diet ကသာလား? ဒါမှမဟုတ် နှစ်ခုလုံးကိုလည်သလို အသုံးချတာကသာတာလား? ဆက်ဖတ်ကြည့်ပေးပါဦးနော်။ သင်သိသင့်တဲ့အခြေခံအချက်တချို့ အရင်ဆုံးသိထားသင့်တဲ့ အခြေခံလေးတွေ ပြောပြပါရစေ။ • သင့်ခန္ဓာကိုယ်က သူများနဲ့မတူပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့်သူများတွေ low-carb diet စားတိုင်း သင်လိုက်စားလို့ အဆင်ပြေချင်မှပြေပါလိမ့်မယ်။ • နာမည်ကြီးနေတဲ့ Fad diet နဲ့ Crash Diet တွေက သင့်ဇီဝကမ္မနှုန်းကို လျှော့ချရုံသာတတ်နိုင်ပါတယ်။ • ကိုယ်အလေးချိန်မချခင်အရင်ဆုံး သင့်ခန္ဓာကိုယ်အမျိုးအစားနဲ့ နေထိုင်မှုစရိုက်ကို ပြန်ဆန်းစစ်ပါ။ […]